Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » WTTC: G20 ihany no afaka manampy ny Travel & fizahan-tany ho sitrana amin'ny krizy COVID-19
The World Travel & Tourism Council (WTTC) miantso ny minisitry ny fizahan-tany G20 hitarika fanarenana mirindra sy mirindra ho an'ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany ivelan'ny Covid-19 krizy.
WTTC, izay misolo tena ny sehatra tsy miankina amin'ny fizahantany & Fizahan-tany manerantany, dia nilaza fa ny G20 ihany no manana fahefana hitaomana sy handrosoana ezaka fanarenana mirindra ilaina hitehirizana ilay sehatra.
Ny fivorian'ny Minisitry ny fizahantany miavaka izay hatao ny zoma 24 aprily dia kasaina hiresahana ny fomba hiadiana amin'ny krizy manimba ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny WTTC, ny valan'ny COVID-19 dia mandrahona ny asan'ny olona 75 tapitrisa manerantany ary asa iray tapitrisa isan'andro, izay misy akony lehibe eo amin'ny tsena lehibe.
Mialoha ny fivoriana dia nidera ny G20 ny WTTC noho ny fandoavana ny trosan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany ho toy ny dingana lehibe ahafahan'izy ireo manatsara ny rafi-pahasalamany, mamonjy aina ary miady amin'ny COVID-19.
Gloria Guevara, filoha & CEO an'ny WTTC, dia nilaza hoe: "Ny rakitsoratry ny G20 izay nanamafy ny fanarenana taorian'ny krizy ara-bola tamin'ny 2008, ary ny hetsika farany natao hanaparitahana trosa dia manaporofo fa ity forum ity no sehatra tsara indrindra miaraka amin'ny hafainganana sy fahaizany ilaina, mandrosoa ireo hetsika maika takiana mba hametrahana ny hafainganana sy hitsimbinana ny sehatry ny Fizahan-tany & Fizahan-tany manerantany ary ahafahany miaina sy mivoatra.
"WTTC dia manolotra ny minisitry ny fizahantany handray anjara amin'ny fivoriana, ary hiara-hiombon-kevitra tanteraka amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fotokevitra efatra lehibe hahatrarana ny fanarenana haingana.
“Tafiditra ao anatin'izany ny fampidirana ny sehatra tsy miankina amin'ny valiny voarindra, hiantohana ny fepetra rehetra hametrahan'ny mpitsangatsangana ny votoatin'ny fihetsik'izy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny dia ataon'ny mpandeha tsy misy fiafarana miaraka amin'ny fenitra fiarovana ara-pahasalamana nohavaozina tamin'ny alàlan'ny teknolojia, ny fampiroboroboana ny protokolom-pahasalamana iraisana ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina G20 ary koa ny fonosana fanohanana mitohy ho an'ny sehatry ny fizahan-tany ankoatry ny fanesorana ny hidin-trano ary mankany amin'ny fanarenana.
"Amin'ny maha-forum voalohany amin'ny fiaraha-miasa iraisampirenena, ny G20 no fiara voaporofo tsara indrindra manampy amin'ny fanatontosana fitoniana ara-toekarena manerantany sy fitomboana maharitra, izay niara-niasa tamim-pahombiazana tamin'ny sehatra tsy miankina hahatratrarana tanjona toy izany. Olona an-tapitrisany eran-tany no miankina amin'ny fihetsiny.
"Eo ambany fitarihan'i Saudi Arabia amin'ny maha-G20 Chair, firenena izay nandrakitra fitomboana haingana indrindra amin'ny harin-karena faobe & fizahan-tany amin'ny taona 2019 izay avo efatra heny noho ny salanisan'izao tontolo izao, ity fihaonana ity dia manolotra sehatra tsara indrindra hiantohana ny fomba voarindra mba hahazoana fanarenana haingana.
"Tsy maintsy tadidintsika fa 75 tapitrisa ny asa atahorana, ary raha tsy misy hetsika haingana avy amin'ny G20 iray amin'ny asa vaovao efatra manerantany ary ny fandraisana anjara 10.3% (8.9 $ US $) ho an'ny harin-karena faobe dia tsy hiteraka ary ny toekarena manerantany hiady mafy mba ho sitrana. Tokony hianarantsika avy amin'ny zavatra niainantsika taloha koa fa rehefa tafiditra ny sehatra tsy miankina dia haingana kokoa ny fanarenana. ”
Ny fitsipika efatra an'ny WTTC hiantohana ny famerenana haingana amin'ny sehatry ny Travel & fizahan-tany sy ny toekarena manerantany taorian'ny faran'ny fihanaky ny COVID-19, dia:
Fomba iraisana iraisana iraisan'ny daholobe sy fiaraha-mientana manerana ny G20 hametrahana indray ny asa mahomby, hanala ireo sakana amin'ny fivezivezena ary hanokatra sisintany indray. Izany dia hiantoka ny famerenana amin'ny laoniny ny sidina, ny fivezivezen'ny olona ary ny fitsangantsanganana malalaka ilaina amin'ny fananganana indray ny fahatokisana ny Travel & fizahan-tany.
Ampitomboy ny traikefa an-dia tsy an-kijanona, manambatra ny haitao farany sy ny protocole mba hampitomboana ny fenitra ara-pahasalamana. Diniho ny "ara-dalàna vaovao" ho an'ny sehatra misy singa momba ny fahasalamana, filaminana, fahadiovana ary faharetana amin'ny fomba centric an'ny mpandeha.
Miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy manam-pahaizana momba ny fahasalamana hamaritana ireo fenitra manerantany ho an'ny ara-dalàna vaovao, miorina amin'ny siansa izay azo raisin'ireo orinasa isan-karazany amin'ny sehatra indostrialy rehetra ary azo ampiharina manerantany.
Manohiza manome fanampiana ny sehatry ny Travel & fizahan-tany mandritra ny dingana fanarenana, mandritra ny rafitra eco-fizahan-tany manontolo. Fanampiana ara-bola ho an'ny mpiasa sy ny orinasa hampiroboroboana ny fahasitranana haingana. Zava-dehibe tokoa ny fahatsapana ny domino vokariny mba hahafahan'ny orinasa lehibe sy kely manarina sy miroborobo rehetra.
Ny fanarahana ireo fitsipika efatra ireo dia hampihena ny fe-potoana fanarenana ny toekarena manerantany ary hanome toky ho an'ireo mpandeha fa mety ny fotoana hijerena sy hitsidihana azy ireo.
Ny maha-zava-dehibe ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany mankany amin'ny G20 dia asehon'ny tatitra farany momba ny Toekarena ara-toekarena WTTC 2020, izay mampiseho fa nanohana asa mihoatra ny 211 tapitrisa izy, na 9.5% amin'ny totalin'ny mpiasa G20.
Ny G20 dia misy ny sasany amin'ireo tsena loharanom-pahalalana ho an'ny ankamaroan'ny faritra manerantany. Ny fitsangatsanganana sy fizahantany manerana ny G20 dia nisolo tena ny 76% amin'ny harin-karena faobe momba ny fizahantany sy fizahan-tany amin'ny taona 2019.
Ny sehatra dia namokatra US $ 6,736.4BN ho GDP, na 9% ho an'ny toekarena G20, nitombo 3.7% raha oharina tamin'ny taona lasa. Ny tatitra feno dia mampiseho fa ity fitomboana ity dia nihoatra ny fitomboan'ny harin-karena faobe G20 tamin'ny 2019 2.6% tamin'io taona io ihany.